‘नेपालमा ४ सय मानिस परिचालन गरेका छाैं’ | Nagarik News - Nepal Republic Media
७ कार्तिक २०७५ २७ मिनेट पाठ
सबै बालबालिकाले उनीहरुसँग रहेको सामथ्र्य पूरा गर्ने अवसर निश्चित गर्नका लागि सामूहिक नेतृत्वको विकास गरिरहेको स्वतन्त्र संगठनहरुको विश्वव्यापी सञ्जाल ‘टिच फर अल’का सहसंस्थापक र प्रमुख कार्यकारी निर्देशक हुन्, वेन्डी कुप । संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेको शैक्षिक असमानतासँग लड्नका लागि उनले सन् १९८९ मा ‘टिच फर अमेरिका’ स्थापना गरेकी थिइन् । उनी टाइम म्याग्जिनको १ सय अति प्रभावशाली व्यक्तिमध्येकी एक व्यक्तिको रुपमा समेत परिचित छिन् । उनी हाल ‘टिच फर अल’को वार्षिक विश्वव्यापी सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि काठमाडौं आएकी छिन् । ‘टिच फर नेपाल’ र विश्वभरको शिक्षामा प्रभाव पार्ने नयाँ पुस्ताको सिर्जना गर्ने आन्दोलनबारे नागरिक दैनिकका गुणराज लुइँटेल र रिपब्लिकाका सुवास घिमिरेले वेन्डीसँग कुराकानी गरेका छन् ।
म सार्वजनिक विद्यालयमा पढेकी हुँ र मेरो बाल्यकाल अत्यन्तै सुविधासम्पन्न समुदायमा बित्यो । वास्तवमा मेरो बाबाआमा आफै चाहिं सुविधासम्पन्न पृष्ठभूमिका थिएनन् तर उनीहरू आफै त्यस्तो समुदायमा आइपुगेका थिए जहाँ राम्रा सार्वजनिक विद्यालय थिए । मैले अमेरिकामा उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त गरें र प्रिन्सटन विश्वविद्यालय गएँ । त्यहाँ पुगेपछि मैले अमेरिकामा विद्यमान असमानता देख्न थालें । तपाईं अमेरिकाका कलेज र क्याम्पसमा कसरी मानिस हुर्किएका ठाउँका आधारमा फरक शैलीमा तयार पारिन्छन् भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ । मेरो पहिलो वर्षको कक्षाकी रुममेट न्यूयोर्कको दक्षिण ब्रोन्क्सको सार्वजनिक विद्यालय गएकी थिइन् । सो क्षेत्र अमेरिकामा अत्यन्तै गरिब समुदाय बस्ने क्षेत्र मानिन्छ । मैले उनी र उनका साथीमार्फत सो क्षेत्रको पहिलो पुस्ताको कलेज विद्यार्थीलाई देखें र हामी कसरी फरक शैलीमा तयार पारिएका रहेछौं थाहा पाएँ । यो कुराले मलाई हाम्रो देशको वास्तविकताबारे सोच्न बाध्य बनायो र यसले मलाई अमेरिकामा वास्तवमै समान अवसर छैन भन्ने अनभूति दिलायो र तपाईं जन्मिएको ठाउँले कसरी तपाईंको शैक्षिक नतिजालाई र जीवन निर्धारण गर्छ भन्ने विषयमा सोच्न विवश बनायो । प्रिन्सटन विश्वविद्यालयमा सार्वजनिक नीति प्रमुखका रूपमा मैले यस विषयमा थप अध्ययन गर्न थालें र जब म मेरो पढाइको अन्तिम वर्षमा पुगें मैले आफूले आफैलाई सोधें मैले मेरो जीवनमा के गरेर बिताउन चाहन्छु । मैले निश्चित गरें की म जे पनि गर्न सक्छु । त्यो सबै हाम्रो देशमा भएको शैक्षिक व्यवस्थाको कारण थियो । धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई कसरी राम्रो शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने विषय मैले सोच्दा त्यो स्वतन्त्रताको बाटोबाट मात्रै सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगें । मैले ‘टिच फर नेपाल’ स्थापना गर्दा यो विषय नै मेरो दिमागमा चलिरहेको थियो।
टिच फर नेपालले पछिल्ला पाँच वर्षमा नेपालमा उल्लेखनीय काम गरेको छ । टिएफएनबारे तपाईंले के देख्नु भएको छ र धेरैभन्दा धेरै नेपाली बालबालिकाको शैक्षिक नतिजा सुधारका लागि टिएफएनले कसरी भूमिका खेल्न सक्छ जस्तो लाग्छ?
शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य थुप्रै विषयका नाममा नेपालमा धेरै पैसा आइरहेको छ । तर त्यो पैसा कतैतिर हराइरहेको छ । के ‘टिच फर अल’ ती स्रोतहरुमा पुग्नेबारे केही सोचिरहेको छ?
पक्कै पनि । यही प्रश्नले नै हामीलाई सोच्न बाध्य बनाइरहेको छ । निम्न र निम्न मध्यम आय भएका विश्वका देशहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै आर्थिक स्रोत हो । हामीले ती देशमा शिक्षाका लागि त्यस्तै १३ देखि १४ विलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिरहेका सबै विकास सहायताबारे सोचेका छौं । स्थानीय नेतृत्वको क्षमता विकासमा कसरी साँच्चिकैको दीर्घकालीन प्रभाव पारिरहेका स्थानीय संगठनलाई कसरी आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न सकिन्छ ? यस्ता प्रकारका सहायताका धैरै हिस्सा सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमा जान्छन् जसले वास्तवमै ठूलो महŒवपूर्ण मात्राको प्रतिबद्धता गर्न सक्छ तर हामीले स्थानीय संगठनमा कसरी धेरै आर्थिक सहायता पाउन सकिन्छ भनेर थाहा पाउन जरुरी छ जसले स्थानीय नेतृत्व क्षमता बनाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
यसै साता हुन लागेको वार्षिक विश्वव्यापी भेलाबारे केही बताउनुहोस् । ‘टिच फर अल’ले यो सम्मेलन नेपालमै गर्न किन चुन्यो?
प्रत्येक वर्ष हामीले विश्वभर रहेका ४८ वटा ‘टिच फर अल’ संजाल साझेदारका प्रमुख पात्र र समर्थक र विश्वभरका दूरदर्शी साझेदारको भेला आयोजना गर्छौं । हामीले यस्तो भेला प्रत्येक वर्ष विश्वका विभिन्न भागमा गर्ने गरेका छौं र हाम्रो सामूहिक सोचाइलाई थप परिष्किृत गर्नका लागि विभिन्न मुद्दामा केन्द्रित भएर यस्तो भेला आयोजना गर्ने गरेका छौं । टिएफएनले लिइरहेको समुदाय केन्द्रित पहुँचमा तल्लीन हुन हामी नेपाल आएका छौं किनभने हामीलाई लाग्छ हाम्रो उद्देश्य जुन विश्वभर सामुदायिक तहको प्रगति हो त्यो प्राप्त गर्नका लागि यो अत्यन्तै आवश्यक रहेको छ । बालबालिकाका सुखद् भविष्यका लागि र हामी सबैका लागि समुदायभर रहेका बालबालिकाले शिक्षा प्राप्त गर्न र सर्मथन प्राप्त गर्न र अवसर प्राप्त गर्नका लागि सम्भव रहेको मानिसहरूले देखाएका छन्।
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७५ १०:०९ बुधबार